Kedu mgbe igwe taya ụgbọ ala na-agbanwe? Nwee ụgbọ ala ma ọ bụ enweghị ụgbọ ala ịhụ! -News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Kedu mgbe igwe taya ụgbọ ala na-agbanwe? Nwere ụgbọ ala ma ọ bụ enweghị ụgbọ ala ị ga-ahụ!
Oge: 2021-05-10 Hits: 37
Ekwenyere mgbe nsogbu a ga - agbanwe taya nke ndi mmadu nwere otutu ugbo ala, onu obula na azịza ha abughi otu, nke na - eme ka otutu mmadu ghara inwe mgbagwoju anya.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ndụ nke iji taya eme ihe bụ afọ 4 ruo 5, mgbe afọ 5 gachara ọ bụrụgodi na ọ dị obere obere ọ kachasị mma iji dochie ya, n'ihi na roba na-eme agadi ga-aka nká ogologo oge, na ọtụtụ obere Dị ka ihe atụ, akụkụ nke ịka nká na-amalitekarị site na nsọtụ taya ma ọ bụ ubu, ogologo oge anwụ na mmiri ozuzo ga-eme ka elu roba ahụ gosipụta obere mgbawa, mgbawa ndị a na-egosi na ibu ikike na ogo nke taya n'oge a amalitela ịjụ, iji belata ihe ize ndụ nke taya na-agbawa ihe kachasị mma n'ọdịnihu.
Na mgbakwunye na ịka nká, taya na-adapụkwa n'ụzọ nkịtị. Ya mere, ụlọ ọrụ nrụpụta tupu ụlọ ọrụ ahụ ga-aka akara n'akụkụ akụkụ nke taya ahụ, iji gosipụta ezigbo oge nke taya ahụ. Maka taya ahụ na-enweghị akara akara anyị nwekwara ike jiri calipers (ma ọ bụ onye na-achị achị pụrụ iche) maka mmesho, omimi miri dị omimi bụ ihe na-erughị 1.6 mm nke taya ahụ enweghị ike ịga n'ihu na-eji, n'ihi na n'oge a, a ga-ebelata arụmọrụ drainage na arụmọrụ jabbing. , ọ bụrụ na taya akụwo ugboro atọ ma ọ bụ anọ, a na-atụ aro ka ị gbanye taya ahụ na igwe na-abụghị nke ma ọ bụ nke azụ iji belata ihe egwu nke taya taya.
N'ezie, ndụ nke taya ụgbọ ala nwekwara ọtụtụ ihe iji mee udo, nke mbụ, anyị ga-ahụrịrị na taya ahụ na-adịkarị na nrụgide taya nkịtị, nrụgide taya dị ala ma ọ bụ nke dị elu ga-enye Nchekwa taya nchebe zoro ihe ize ndụ.N'ihi ichetara gị ka ị ghara ikwere ihe anya gị hụrụ, n'ihi na ugbu a, ọtụtụ ụgbọ ala nwere taya taya radial dị ala, mgbe ụfọdụ site n'èzí ga-adị ntakịrị, mana ọ pụtaghị na ọ ga-emerịrị efufu ikuku, akụrụngwa nrụgide ọkachamara bụ naanị ụzọ iji chọpụta nrụgide taya. Tụkwasị na nke ahụ, mgbe ị na-achọpụta nrụgide taya, ọ ga-adị na steeti taya oyi. Ọ bụrụ na ọ bụ taya ọkụ, uru a tụrụ kwesịrị belata 0.3Pa ka ọ bụrụ nke ziri ezi.
Ojiji nke taya ụgbọ ala nwere njikọ chiri anya na nchekwa ịnya ụgbọ ala, na enweghị ike ileghara anya, onye ọ bụla nwe ya kwesịrị ịmụ ụgbọ taya
Previous: Obi ụtọ Ramadan
Ọzọ: Ụbọchị nne